MAXAY GALABSADEEN OO LAGA GOYNAYAA? MAQAAL XIISA BADAN.
arlaadi December 31, 2016 No Comments
Waxaa indHuhu daawanayaan ruuxuna dul joogaa, Ma dadkaa dareenkiyo ka dhaamatay damqashadii? Ma dalkey neceenoo, danna aan u biday dareen igu soo duxayoo aan rabo inaan dad weynaha la qeybsado.
Inkastoo aan ahay qurba ku nool haddana wuxuu qalbigayga u dhuun daloolaa la socodka xaaladdaha nololeed ee shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan kuwooda maatida ah sida agoonta iyo hooyooyinkooda, waayeelka, curyaamiinta, dan yarta iyo kuwa dadka iska indha tiray awoodda Allah ula baxeen magaca ah “Looma Ooyaan-ta”.
Markaan doc walba ka rogrogay oo sabab kasta aan dul joogsaday waxaan waayey wax cudur daar ah. Waana tan igu dhalisay inaan akhristayaasha maqaalkan weydiyo: BAL MAXAY GALABSADEEN OO LAGA GOYNAYAA?
Akhristow waxaan kuligeen ka warqabnaa in Baydhabo (iyo Guud ahaanba geyiga Koonfur Galbeed) iyo dadkeeduba soo mareen dulmi, dagaalo, boob iyo hagardaamo aan loo meel dayin oo saameysay dhamaan shacabkii xalaal quudatada ahaa oo ahlu diinka ahaa taariikhda Soomaaliyana aan lagu heynin in ay dad ama deggaan ay dulmi ugu duuleen oo dad ku dhaceen ilaa iyo inay is-difaacaan ma oggiye.
Marka arrimaha noocaas dhacaan waxaa sida caqliga saliimka ah ina barayaan in shacabku bislaadaan oo kala gartaan xabiibkooda iyo xaasidkooda., u istaaganaa sidii ay uga hortagi lahaayeen aafooyinka meel walba uga soo socda.
Dhibaatooyinka shacabka deggaandaas heystaa waa tiro badan yihiin oo waxaa 90% maqan adeegii aasaasiga ahaa ee Bulshooyinka kale ee Soomaaliyeed heystaan sida adeega caafimaadka, biyaha, beeraha iwm
Akhristow ma ogtahay in ka badan 56 sano (intii xoriyadda la qaatay) ka dib in weli HOOYO SOOMAALIYEED OO DA’YAR AY KU UMMUL RAACDO MAGAALADA BAYDHABO IYO DEGAANADA KALE EE KOONFUR GALBEED.
Mase ogtahay in badan oo Allah ka badbaadiyey fooshii ay la il daran yihiin in KAADI HEYSTOODA IYO QEYBTA SAXARADU ISU FURMEEN oo saxaradoodu soo raacdo kaadida. Dhibaatooyin caafimaad oo mid jir iyo mid maskaxba (Depression) ka qaadeen oo sidaa kii qabayna uga dhaqaaqay naag kalena ka guursaday.
Allah ayaa wax badbaadiya, waxaan hubaa in Geeridaa, baroorta iyo gablankaa maalin walba taal Baydhabo in dumarkaa la badbaadin karay haddii la heli lahaa shacab dantooda guud u heelan, madax dadka u damqada, ganacsato Allah iyo Rasuul taqaan, Qurba Joog waddani ah, Aqoon yahan dib u guda abaalki loo galay, Suxufi aan siyaasad ku mashquulin una heelan inuu af-hayeen u noqdo maatida, Culimo dadka ku wacdisa Midnimada iyo Dumar u is-taaga wax ka qabashada geerida ummul raaca ah ee maalin walba gabar 18 jir ah oo da’dii ugu horeeyay ku ummul raacdo. Bal aan mid-mid u soo qaato.
SHACABKA IYO HOGGAAMIYA DHAQAMADEEDYADA
Ilaahey wuxuu Quraankiisa Kariimka ah inoogu sheegay “Allah Qowm ma beddelo ILAA ay iyagu is-beddelaan”. Kiina xun iyo kina fiicanba idinkuu idin ka dhasahy. Haddaadse kuwiina idinka xumaa aad u doorataan inay idin hoggaamiyaan hadee haddii la idin gacan bidxeeyo oo aan waxba la idiin qaban cidina ha eedina ee mirahaad beerateen gurta.
Mid oggaada “Ugaasnimo waa nin iibsaday iyo nimuu Eebaheey u ishaaray”. Xildhibaan ama madax kasta oo kursiga lacag kaaga iibsaday haka sugin inuu adiga danahaada ka shaqeeyo ama aad la xisaabtami kartid. Lax weliba shalalkey is-dhigtaa lagu gowracaa.
MADAXDA SIYAASADDA EE DEGAANADA KOONFUR GALBEED
Waa hubanti in tiro aad iyo aad u yar oo idinka mid ahi uu weli ku dambeeya damiir damqada laakiin aan rabin inay talaabo qaadaan sababo aan fahmi Karin awgeed.
War siyaasigow, haddii waxqabad la’aantaadu shacabku u dhamaanayo oo aad tii ALLAH iyo dhaartii aad Quraanka ku dhaaratay aad meeshii aad ku dhaaratay uga soo tagtay yaad xukumeysaa, xeradaada dad iyo duunyo ba waa kuwa silic u dhintay iyo kuwa dhabihii ku taagan.
Waxaan madaxda su’aalayaa waxaan dhowr jeer ka aragnay TV-yada iyo Website-yada in Dowladda Turkiga iyo Sacuudiguba ballan qaadeen inay Baydhabo ka dhisaan Cusbitaalka Haweenka iyo Carruurta aad u weyn oo baahi tiro dadka ku nool deggaankii la isku dhihi jiray Jubbada Sare. Maxaa hakiyey ama hor taagan in Cusbitaaladaa la dhiso? Ma dano shaqsiyadeed (Sida anaga shirkaddeena qandaraaska halagu siiyo, ama marka hore aniga waxayga hala ii cadeeyo iwm)ayaa hortaagan?
Shacabka iyo Hoggaamiya dhaqameedyada maxay la hadli la’yihiin oo aysan ula xisaabtameynin madaxdooda. WAR XAGEEY SALAADDU ISKA QABAN LA’DAHAY?.
GANASATADA IYO SHIRKADAHA KA SHAQEYSTA DEEGAANKA
Runta Rabbi baa nagu jecel, meesha shacabka Koonfur Galbeed ka kici la’yahay waa ganacsatada iyo shirkadaha ka shaqeysta deggaanadaas.
Waa su’aalee dadka Koonfur Galbeed miyeysan Muslim ahayn?, miyeysan sadaqada iyo zekada ku bixin?, miyeysan xaq u lahay inay helaan nolol sida gobolada kale ee Soomaliya? MAXAY GALABSADEEN OO LAGA GOY NAYAA?
Tusaale: Waxaa shalay oo taariikhdu ahayd 30/12/16 ka daawaday Universal TV in deeq raashin ay shirkadda Hormuud ah gaarsiisay dad walaalaheen ah oo deggan Galmudug. War kuwa Baydhabo biyo la’aanta iyo abaartu ku heyso miyeysan dad Soomaaliyeed ahayn.
Walaalayaal marnaba wax la qaadan karo ma ahan in deegaanka Koonfur Galbeed laga ganacsado oo zakadii ka soo baxday faa’idadaas laga mamnuuco.
Waxaan maalin walba ka daawanaa TV yada in Shirakadaha tunka weyn iyo ganacsataduba ka dhisaan wadooyin, dugsiyo, cusbitaalo, ceelal iyo baraagooyin, garoomo lagu ciyaaro gobolada kale sida Somaliland, Puntlan, Galmudug, Jubbaland, iyo Banadirba.
Haddaba maxaa la gudboon shacabka degaanada Koonfur Galbeed? Fadlan fadhiga ka kaca oo XOR baad u tihiin inaad JOOJISAAN inaad isticmaasho ama aad iibsato ganacsiga dadka aan deggaanka wax u qaban ama ha ahaadaan kuwa sheegta inay dhulkaa u dhasheen ama ha ahaadeen kuwa u soo shaqo tagay sidii inaad tihiin South Sudan.
QURBA JOOGTA IYO AQOON YAHANADA
Walaalaheyga Qurbajoogta iyo Aqoonyahanada waxaan u sheegayaa “Haatoy” iyo “Doo” aan ficil la soconin degaankeena ma dhisto, dadkeenuna ma daryeesho (BIYO SACABADAADAA LOOGA DHERGAA).
Haddaad u oggaan lahaydeen waxa manta ka taagan deggaankeena ka siyaasad ahaan iyo ka adeegga bulshada ahaa wax badan waad ooy laheedeyn. Waxa maantu arrinku taagan yahay “Allaysa Cindikum Rujaal”. War ma hilmaanteen taariikhdii madoobeyd ee “City of Death”?
Walaalayaal siyaasadaan ah kan taageer (oo waxaad ku taageeri oo aan qabiil ahayn jirin) kana mucaarad oo facebook- yada ka caay intaad iska dhaaftaan dadkiina wax u qabta. Haddii kale xerooyinkii Qaxootiyada ee Xamar, Puntland iyo Somaliland waa maran yihiin. Abaar iyo biyo la’aanna waa bilaabatay. Waxa loo xaaq-xaaqanaayo xerooyinkaas waa dadkiina oo la rabo in NGO yada lacag looga qaato. Weli ma aragtay Reer Puntland, reer Somaliland and reer Galmudug oo xerooyin qaxooti looga ooday Xamar? War miyeydaan damiir lahayn oo aydan ka damqaneyn dadkiina oo xerooyin lagu ootay (Shame on you)
War hadii cudurka Qabyaaladda jirkaaga ku faafay sidii Leukaemia, war xitaa agoonta ama dadka saboolka ah ee Jufadaada wax u qabo. NBB la soo xiriir anagaa kuu balanqaadeynaa inaan saboolka jufadaada ah kuu helno.
HAWEENKA KOONFUR GALBEED
Waa kooxda keliya aan is leeyahay wax waa qaban karaan. Gabdhaha walaalaheyga ahoow ama dalkii joog ama qurbaha joog cidda dhibta raggu geystay ku dhaceyso waa idinka, carruurtiina iyo waayeeladiina.
Maxaad la aamusan tihiin? Maxaa idinka hortaagan inaad Dalka iyo Dibaddaba isku xirnaataan oo aad soo bandhigtaan awooddiina?
Ha oggolaaninna in hooyo dambe ay Koonfur Galbeed ugu umul-raacdo daryeel la’aan. Sandule lacagta uga qaada ragga madaxda ah, ganacsata iyo shirkadahooda iyo qurba joogtaba.
Waxaa maanta Somali kala hormariyey waa HAWEENKA. Tusaale (midka ugu yar) dayactirka waddada ku taala Xamar ee Jeneraal Daa’uud waxaa ku baxday boqolaal kun oo dollar. Waxaana lacagtaas soo aruuriyey Haween sidiina oo kale ah. Xaggiina dhaxan baa iga soo galeyso ee iga daboola.
Waxaan nafteyda iyo tiinuba kula dardaarmayaan Cabsida Allah iyo u gargaaridda HAWEENKEENA uurka leh ee ku dayacan Baydhabo.
“Abkuu doono ha sheegto’e wuxuunbaa EHEL ii ah DAD ninkaan af-aqaanee si wax iila arkaayee na MIDEYSO ujeeddo” Mohamed Xaashi Dhamac (Gaariye)
Dr Aweys Cabdi Jidle
Aasaasaha ahna Xiriiriyaha Guud ee Naadiga Baayazaaniyiinta Baydhabo (NBB)